Apple waxay soosaaraysaa shaashad dibadeed oo leh processor isku dhafan | Waxaan ka socdaa mac
Apple waxay soosaaraysaa shaashad dibadeed oo leh processor A13 oo isku dhafan
Toni Cortes | 24/07/2021 20:00 | Xanta
Apple waxay ka shaqeyneysaa nooc cusub oo bannaanka ka ah Pro Display XDR oo leh processor isku dhafan. Fikrad weyn in laga xoreeyo Mac-kaaga ku xiran xisaabinta sawirada. Taasi waxay macnaheedu noqon doontaa in lagu xiro mac mini fudud, waxaad yeelan doontaa xarun shaqo oo awood leh oo loogu talagalay tafatirka sawirrada iyo fiidiyowga, ama ciyaaraha.
Dhibaatadu waxay ku imaan doontaa qiimaha. Haddii shaashad dibadeed oo ka socota Apple ay durba qiimo leedahay, ma doonayo inaan ka fekero waxa ku kacaya iyadoo la adeegsanayo processor isku-dhafan iyo Neural Engine. Waan arki doonaa…
Bandhigga Apple Pro Display XDR wuxuu ahaa mid muddo soo jiray, laakiin ma jiraan wax xan ah oo ku saabsan nooca la cusbooneysiiyay muddada gaaban. Laakiin waxaa soo baxday in Apple ay gudaha ku tijaabineyso muuqaal cusub oo banaanka ah oo leh Processor A13 heegan ah oo waliba leh Mashiinka Neerfaha.
Bandhigga cusub waxaa lagu soosaarayaa magaca sumcadda J327, laakiin waqtigan, faahfaahinta ku saabsan qeexitaannada farsamo waa qarsoodi. Waxay umuuqataa in shaashadani yeelan doonto SoC ay sameysay Apple, oo xilligan la joogo ay tahay A13 Bionic chip, oo ah isla kii loo adeegsaday khadka iPhone 11.
Si wadajir ah ula socda guntinta 'A13', muuqaalka dibedda wuxuu ka kooban yahay 'Neural Engine', oo xawaareynaya howlaha waxbarashada si otomaatig ah. Bandhigga noocan oo kale ah ee dibadda leh SoC-da gaarka ah waxay u egtahay inuu yahay nooc cusub oo lagu beddelayo midka hadda jira Pro Display XDR.
Xaqiiqdii waxay noqon laheyd fikrad weyn. Hayso a Isku-darka CPU / GPU shaashadda dibedda waxay ka caawin kartaa Mac-yada inay soo gudbiyaan sawirro xallin sare leh iyaga oo aan adeegsan dhammaan ilaha processor-ka gudaha ee Mac.
Apple sidoo kale waxay isku dari kartaa awooda SoC ee bandhigga processor-ka Mac si ay u bixiso xitaa waxqabad dheeri ah oo loogu talagalay socodsiinta howlo aad u xasaasi ah. Suurtagal kale ayaa ah in loo isticmaalo SoC-kan si loogu daro qaar ka mid ah astaamaha caqliga Pro Display XDR, sida AirPlay.
Lama oga sida mashruucu u socdo, iyo haddii dhawaan ayaa la sii deyn doonaa iib ah ama weli waa waqtigii ay diyaar u noqon lahayd. Waxaan dheg u noqon doonnaa wararka xanta ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Apple waxay soosaaraysaa shaashad dibadeed oo leh processor A13 oo isku dhafan
Deeq ka timid Apple Germany, Studio Buds, iyo waxyaabo kaloo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Fiidiyow cusub oo Apple Watch ah oo saameynaya caafimaadka isticmaalaha